Cuntada & Beeraha Wararka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Qaar badan oo ka mid ah beeraleyda guryaha waxay doorbidaan inay isticmaalaan sunta cayayaanka dabiiciga ah ama dabiiciga ah (cagaaran) kuwa sunta kiimikada waxyeellada leh. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waqtiyo aad u baahan tahay inaad jidka kale aaddo. Marka ay sidaas tahay, waa lagama maarmaan in la hubiyo alaab-qeybiyeyaasha cayayaanka keena, gaar ahaan badbaadada alaabta laftooda. Tayada badeecada aad ka soo […]Read More
Sida loo iibsado Caleenta Fresh Fresh
Si aad u hesho badeecada ugu fiican ee suurtogalka ah, waa inaad haysataa liiska alaab-qeybiyeyaasha aad ku tiirsanaan karto. Dadka iibiya tayo-xumida marwalba waa loo baahan yahay. Waxaad dooneysaa inaad ka hubiso alaab-qeybiyahaaga si aad u hubiso inay yihiin kuwo sumcad leh iyo inay leeyihiin qiimo wanaagsan. Waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad ogaataa […]Read More
Soosaarayaasha Mutton Qaboojiyay - Tilmaamaha
Waxaa jira shirkado dhowr ah oo soo saara hilib barafaysan. Waxa ugu muhiimsan ee la sameeyo waa in la helo shirkad bixisa alaab tayo leh. Tani waxay caqabad ku noqon kartaa dad badan, laakiin aad ayey suurtogal u tahay in la helo badeecad wax iibisa oo qaboojiye ah oo soo saarta alaabooyin wanaagsan. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo kaa caawin doona […]Read More
Bixiyeyaasha Cunnada Kiwi
Alaab-qeybiyeyaasha waa inay siiyaan kiwi cunno nafaqo leh, xaaladaha saxda ah iyo hab-maamuusyo gaar ah si loo soo saaro kiwi caafimaad leh. Alaab-qeybiyeyaashani waxay u heellan yihiin tayada wax soo saarkooda, ballanqaadkan ayaa iyaga ka dhigaya il weyn oo loogu talagalay macluumaadka beerashada kiwi Marka la eego maaraynta silsiladda sahayda ee heerka koowaad, Kiwi [Read More
Miraha Fresh iyo Qudaarta Qudaarta
Markaad diyaar u tahay inaad alaab ka dalbato kuwa kale ee miraha keena, hubi inaad heshid midka bixiya labada shey iyo keenista. Habkaas, ma jirto wax khatar ah oo ah inaad hesho shey khaldan oo aad ku seegto, iyo sidoo kale dammaanad qaad ah inaysan sheygaaga u rarin tartame. […]Read More
Sidee loo bixiyaa Doogga Dhir-dilista iyo Sunta Cayayaanka
Warshadaha ka hortagga cayayaanka waxay soo saareen habab badan oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ay keeneen maaddooyinka sunta cayayaanka lagu buufiyo. Farsamooyinkan waxaa lagu daraa barnaamijyada tababarka iyo xeerarka EPA si loo bixiyo adeegyo kiimiko ah oo badbaado u leh deegaanka lana kulma heerarka EPA. Organophosphates waxaa loo isticmaalaa dalabyo kala duwan oo dalagyo ah oo ay ka mid yihiin doogga, fungicides, iyo cayayaanka. Si kastaba ha noqotee, […]Read More
Helitaanka Waxyaabaha Bixinta Bay Leaf ee Alaabadaada
Waa muhiim in si caqli leh loo doorto Bixiyeyaashaada Caleenta Baay. Adoo iyaga u doorta si sax ah, waxaad ku raaxeysan kartaa faa'iidooyinka lahaanshaha wax soo saar tayo leh. Nasiib darrose, maahan in dhammaan Bixiyeyaasha Baay Bay u qalmaan inay bixiyaan adeegga tayada leh ee aad filayso. Bixiyeyaasha Caleemaha Baay ee aan u qalmin Buug-Tilmaame-bixiye Bixiyeyaasha Baay-Baay waxay noqon karaan […]Read More
Sida looga ilaaliyo qoyskaaga cayayaanka Isticmaalka sunta cayayaanka ee dabiiciga ah
Si loola dagaallamo cayayaanka oo looga saaro weligood si loo badbaadiyo gurigaaga, ma suurtagal baa? Haa, gabi ahaanba! Akhriso si aad wax uga baratid sida loola baxo iyaga oo wata alaab dabiici ah oo wanaagsan. Qaar kamid ah alaab-qeybiyeyaasha sunta cayayaanka ayaa iibin doona kiimikooyin fara badan hadana wax soo saarkooda ma noqon doono midka ugu waxtarka badan deegaankaaga. Kiimikooyinka waa inay ahaadaan […]Read More
Digirta Kilyaha iyo Caafimaadkaaga
Marka xagee ka heleysaa alaab-qeybiyeyaasha digirta kilyaha? Miyaad ka faa'iideysataa faa'iidooyinka badan ee ku yimaada cunista digirta kalyaha? Maqaalka soo socda ayaa fiirinaya qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka yimaada qaadashada digirta kelyaha si joogto ah. Marka hore, aan ka hadalno sida digirtu u caawin karto [your]Read More
Bedelka Cawska Qarniga ee Farshaxanimo
Tobankii sano ee la soo dhaafay, cawska macmalka ah ayaa ah midka inta badan loo isticmaalo dusha dhallinta iyo horyaalada dadka waaweyn ee dhammaan cayaaraha. In kasta oo dusha sare ee ciyaartu aaney si gaar ah caan ugu ahayn kooxaha isboortiga xirfadleyda ah, haddana waxay noqotay mid aad u baahsan sannadihii la soo dhaafay. Marka hore, way ka jaban tahay kuwa kale oo badan […]Read More